Izindaba - I-Goddess Festival, i-FAYGOUNION salon ehlela izimbali
I-Goddess Festival, i-FAYGOUNION salon yokuhlelwa kwembali
Umkhosi woNkulunkulukazi usufikile, kanti iFAYGOUNION ihlele isalon yokulungisa imbali yabesifazanekazi. Egameni lezimbali, onkulunkulukazi baseChina bazoya endabeni yezimbali ndawonye. Nginifisela usuku oluhle lukaNkulunkulukazi!
Ama-Roses, ama-platycodon, ama-carnation, ama-daisy, uthisha wethula kuwo wonke umuntu izinhlobo zezimbali ezisetshenziselwa ukuhlelwa kwezimbali namuhla, futhi wakufundisa ngesineke ukuthi ungaziphatha kanjani izimbali ezahlukene ngezindlela ezahlukahlukene. Ngemuva kokuqalwa kwembali ngokusemthethweni, uthisha wacela wonke umuntu ukuthi afake uhlaka ngokuya ngokuthanda kwakhe, abese esebenzisa i-rose njengembali enkulu, bese efaka ezinye izimbali ngokukhululeka endaweni ephakeme, bese esebenzisa amabhlomu angachichimeki njengoba isandiso sokuvumela ukubukeka konke. Kuzwakala sengathi kunwebela ngaphandle.
Yize izinhlobo zezimbali ngokuyisisekelo ziyefana kuwo wonke umuntu, ngaphansi kwezandla ezinekhono zikankulunkulukazi ngamunye, imbali ngayinye enamanzi ehlukile.
Ngemuva kwembali ehlela isaluni, amaFlying Pigeon Fanciers nawo alungiselela onkulunkulukazi amaqebelengwane!
Futhi, namuhla kubuye kube usuku lokuzalwa lukathisha wezimbali! Akugcini lapho, le nyanga futhi iyinyanga yokuzalwa kwalaba bafana ababili, uXiao Chen noXiao Yang weFlying Pigeon Fanciers. Ukuthatha leli thuba, wonke umuntu ubathumelele ingoma yokubingelela yosuku lokuzalwa ~
Abesifazane banjengezimbali, nezimbali ziqhakaza njengamaphupho.
Ngiyethemba ukuthi onkulunkulukazi beFlying Pigeon Fanciers bangaba yilanga labo! Kwangathi kungaba khona ukukhanya emehlweni akho! Sengathi bonke abesifazane emhlabeni bangajabula futhi babe yizindlovukazi zabo kuze kube phakade.
Isikhathi sokuposa: Mar-08-2021
Single Wall lukathayela Pipe Line, HDPE Double Wall lukathayela Pipe Production Line, Single Wall lukathayela Pipe Machine, Double Wall lukathayela Pipe Machine, Umugqa we-HDpe Corrugated Pipe Extrusion, Pe / Kk / PVC lukathayela Pipe Production Line,